ဘရာဇီးမိတ်ဆွေ Bolsonaro ? – JucelinoLuz
ဘရာဇီးမိတ်ဆွေ Bolsonaro ?
နိုင်ငံ၏လွတ်လပ်ရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားနှင့်သက်ဆိုင်သော၊ မျိုးချစ်စိတ်; အမျိုးသားရေးကိုထောက်ခံသောသူ၊ နိုင်ငံကိုအကြွင်းမဲ့တန်ဖိုးထားသောနိုင်ငံရေးအယူဝါဒကိုထောက်ခံသည်။
Jair Bolsonaro သည်ဘရာဇီးတွင်အာဏာရှင်များနှင့်အကျင့်ပျက်သောလူများကိုမွေးဖွားစေသောကြောင့်၎င်းအားအဖွဲ့အစည်းများကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်၏နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဒီမိုကရေစီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးအမြတ်ထုတ်သူများနှင့်အဂတိလိုက်စားသောလူများအပေါ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုထိန်းသိမ်းသောအစဉ်အလာကိုထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးသမားများကနှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ပြည်သူ့ဘဏ္fromာကိုမတရားရယူခြင်း၊ အခွင့်ကောင်းယူဖို့လူတွေနဲ့ပိုနီးစပ်အောင်လုပ်ပါ။ အဲဒါကဘရာဇီးလူမျိုးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့အရာအသစ်မဟုတ်ဘူး။ သူသည်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီသက်တမ်းနှစ်ပေါင်း ၃၀ တွင်ဤနည်းအတိုင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်များသည်ဥပဒေရေးရာအပါအ ၀ င်လုံလောက်သောတုန့်ပြန်မှုမပါရှိဘဲဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်ခွင့်များနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတန်ဖိုးများကိုပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သူသည်လူကောင်းတစ်ယောက်ကဲ့သို့ပြုမူခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်အဂတိလိုက်စားသောလူများနှင့်သူတို့၏ရန်သူများကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်းနှင့်နီးစပ်သောနိုင်ငံသားတစ် ဦး အဖြစ်ဘရာဇီးရှိအကျင့်ပျက်သူအားလုံးသည်တာဝန်မဲ့ခြင်းနှင့်မထိုက်တန်ပေ။ မည်သည့်တုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားမဆိုဒီမိုကရက်များနှင့်များစွာလျော့နည်းသောတရားစီရင်ရေး ဆိုလိုသည်မှာအုပ်ချုပ်မှု၏အသက်တာကိုထိန်းထားသူများ၊ သူခိုးများ၊ သူခိုးများ၊ လုံခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်သုညပညာရေးတို့ကြောင့်လူ ဦး ရေကိုအရှက်ရစေသောအရာနှင့်သူသည်ငွေများထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ဒရယ်အစိုးရထံမှမျက်နှာသာပေးခြင်းနှင့်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ တိရိစ္ဆန်ကဲ့သို့ပြုမူ။ ဤနိုင်ငံသားကောင်းကိုသမ္မတရာထူးမှဖယ်ရှားရန်အရာအားလုံးကိုတီထွင်ပါ။ ၎င်းအဖွဲ့သည်ပြည်ပအစိုးရတစ်ခုနှင့်လျှို့ဝှက်စီးပွားရေးလုပ်ခြင်း၊ အမိမြေကိုသစ္စာဖောက်မှုရာဇ ၀ တ်မှု၊ ပုဒ်မ ၁၄၂ တို့ကိုကျင့်သုံးခြင်းဟုသံသယရှိသည်။
အချိန်တွေတရွေ့ရွေ့နဲ့ဒီအကျင့်ပျက်လူတန်းစားတွေရဲ့အကန့်အသတ်ကိုရောက်သွားတယ်၊ သူတို့ကဲ့ရဲ့တဲ့သူတွေကိုဟာသတွေ “blagues” တွေအဖြစ်ပြောင်းချင်ကြတယ်၊ အဲဒါကြောင့်သူတို့ကသန်းပေါင်းများစွာသောမျိုးချစ်သူရဲကောင်းတွေကိုဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျကျနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာချီတက်ဆန္ဒပြပြီးBrasíliaမှာချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်တယ်။ မလွှဲပြောင်းနိုင်သော၊ အကျင့်ပျက်သူများကဖန်တီးထားသောနန်းတော်များ၏ရှေ့၊ သူတို့အား ၀ င်ခွင့်မပေးသောကြောင့်သူတို့၏အာဏာသည်ဘရာဇီးလူမျိုးများ၏လက်၌ရှိသည်၊ ဥပဒေကိုသုံးသောသူများ၊ ရာဇ ၀ တ်မှုများကျူးလွန်ရန်နှင့်ဘရာဇီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်းနှင့်ချိုးဖောက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေအတွက်ချီးကျူးထိုက်တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အရင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကဘရာဇီးလ်လူမျိုးတွေကိုအတိတ်မှာလှောင်ပြောင်ခဲ့သလို၊ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့အန္တရာယ်မကင်းဘူး။ သူတို့ကြားမှာလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်၊ သူတို့ကတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဘယ်တော့မှတရားစီရင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ရာဇ ၀ တ်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုအာဏာကနေဖယ်ရှားပေးတယ်၊ ဘရာဇီးလ်လူမျိုးတွေကအတူတကွလိုအပ်တယ်၊ တစ်ခုပေးပါ။ ဘုံသဘောတူညီချက်ပေါ်မူတည်ပြီးဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားဖို့လူထုကတရား ၀ င်နည်းလမ်းရှာလိမ့်မယ်။ ဤအစွန်းရောက်မှုများကိုဆန့်ကျင်ခြင်း၊ ဒီမိုကရေစီဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများဟောပြောချက်များကိုကာကွယ်ခြင်း (ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သူများအတွက်ဘရာဇီးတွင်သာလေးစားမှုရှိသောအရာ) ပြတိုက်၏အာဏာရှင်များအားအသံများက CPI နှင့်၎င်း၏ထောက်ခံသူများဖြစ်သော STF သည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖြိုဖျက်ပြီးပါတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအားလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးပါတီ၏ဘက်လိုက်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အကျင့်စာရိတ္တ၊ အများပြည်သူနှင့်တရား ၀ င်လုံခြုံရေးနှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုကာကွယ်ရာတွင်အဖွဲ့အစည်းများ၏လူနည်းစုများရှုံးနိမ့်မှုတို့နှင့်အတူပိုကြီးမားလာသည်။
တိုက်ကြီးရဲ့အာဏာရှင်တွေရဲ့အသံတွေဟာဘရာဇီးမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇ ၀ တ်မှုတွေနဲ့ဆက်နွှယ်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နတ်ဆိုးနိုင်ငံရေးမီနူးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောအာဏာရှင်ဆန်ဆန်လွှမ်းမိုးမှုများနှင့်နိုင်ငံ၏အဓိကခေါင်းဆောင်များ၏နိုင်ငံရေးအမြင်အာရုံချို့တဲ့မှုသည်ဤအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသောရာဇ ၀ တ်မှုများအား“ နိုင်ငံရေးဟောင်း” ကိုစိတ်ပျက်စေသောသူများအတွက်ရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူ့ကိုလောကအမြင်ကိုတောင်မဝံ့မရဲတင်ပြခွင့်ပြုမယ့်အော်ဂဲနစ်ဟောပြောချက်တစ်ခုမရှိရင်သူကစနစ်တကျတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ အကျဉ်းထောင်များအသုံးချခြင်း၊ အကြောင်းအရာများကိုအင်တာနက်မှထုတ်ယူခြင်းနှင့်လက်ကမ်းစာစောင်များကိုဖြတ်တောက်ခြင်းတို့ဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုများစွာကိုလွှတ်ပေးခြင်း၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့်ရာဇ ၀ တ်သားများအားလွှတ်ပေးခြင်းကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဝတ်စားဆင်ယင်မှုများ၊ သံအမတ်ကြီးများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်ဖုံးကွယ်ထားသောအစည်းအဝေးတစ်ခုနှင့်အာဏာအချို့အကြားပေါင်းစပ်ထားသောအမိန့်များကိုတင်ပြရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖွင့်ပြထားသည်။ Covidão – နောင်တွင်အရှုပ်တော်ပုံတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်၊ ဤ CPI ကိုပင်စိတ်မ ၀ င်စားသောသူ၊ အနာဂတ်၌၊ ယခုကျူးလွန်သောရာဇ ၀ တ်မှုများသည်Mensalão, Petrolão, Lava Jato ကဲ့သို့အခြားများစွာ၌ဖြစ်ပျက်သည်။ ဤကဲ့သို့သောအခြားသူများကိုလွှတ်တော်၌သူ၏ရွယ်တူများကအလေးအနက်ထားခဲ့သည် – အဖြစ်အပျက်များစွာရှိခဲ့သည်ကိုသတိရပါ၊ STF ၀ န်ကြီးများအားဖယ်ရှားခြင်း၊ အိမ်၏သမ္မတရာထူးကိုများစွာလျော့နည်းစေခြင်းကိုသတိရပါ။ မရ။ အရာအားလုံးသည်ဘရာဇီးလူ ဦး ရေ၏ဆန္ဒနှင့်အမြဲဆန့်ကျင်သည်။
လက်ရှိတာဝန်သည် Bolsonaro ၏အမှားများကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းသုံးသပ်ရန်ရှောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤရာဇ ၀ တ်ကောင်များသည်မလွယ်ကူပါ။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများပိုမိုသေဆုံးစေခြင်း၊ ပြည်သူ့ဘဏ္inာငွေများဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ ဘရာဇီးရှိအချို့သောအင်အားကြီးနိုင်ငံများမှကိုယ်စားလှယ်များသည်ဘရာဇီးနိုင်ငံအားလုံးအတွက်ဒီမိုကရေစီနှင့်တရားမျှတသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အကြီးမားဆုံးခြိမ်းခြောက်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
သူတို့ကဘရာဇီးရဲ့နာမည်ကိုပြည်ပကိုရွှံ့ထဲပစ်ချတယ်၊ သူတို့ကမင်းကိုစိုးမိုးဖို့ကြိုးစားနေတာ၊ သူတို့ကခိုးပြီးခိုးချင်နေတာ၊ တရားမျှတမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကတရားမ ၀ င်၊ တရားမ ၀ င်ကျင့်သုံးမှု၊ သူတို့သည်ဆင်းရဲသားများထံမှရိုးသား။ ခိုးယူခြင်းခံရပြီးကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့်လူထုလုံခြုံမှုကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကမင်းကိုအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီးစိတ်ပျက်စရာဖြစ်လာစေချင်ကြတယ်။ တနည်းအားဖြင့်လူမှုရေးမညီမျှမှုရဲ့နွံထဲမှာဘရာဇီးလ်လူမျိုးတွေကိုတွေ့ချင်ကြတယ်။ Sensational Media ကြီး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်သင့်အားလှည့်စားရန်သန်းပေါင်းများစွာရရှိစေသည်။
မှားယွင်းစွာမဲထည့်သူ (သို့) မျက်နှာသာပေးခြင်း၊ ပါတီအလံဖြင့်ဖလှယ်ခြင်း၊ ဤအရာကိုသတိရပါ၊ ဘရာဇီးနိုင်ငံပျက်စီးခြင်းအတွက်သင်သာတာဝန်ရှိသည်။
၎င်းသည်ဘရာဇီးမှအာဏာရှင်၊ ရာဇ ၀ တ်မှုများနှင့်အကျင့်ပျက်မှုများကိုဖယ်ရှားနိုင်မည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
ပါမောက္ခ Jucelino Nobrega da Luz – သုတေသီ၊ လွှမ်းမိုးသူနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာလမ်းညွှန်
Bolsonaro, Brasiilia sõber !! ?
Bolsonaro, kaibigan ng Brazil !! ?